Vydia: Tantano ny atiny Video sy ny zonao nomerika | Martech Zone
Vydia dia orinasa teknolojia video 500 Inc izay manome hery ny mpamorona hitantana mora foana ny atiny sy ny zony nomerika amin'ny alàlan'ny sehatra iray afovoany.
Ny mpamorona atiny dia mampiasa ny herin'ny horonantsary amin'ny sehatra sosialy rehetra misy, na izany aza, voafetra ny fahitany sy ny fibaikoany ny fananany ara-tsaina. Vydia dia manome hery ireo mpamorona amin'ny famahana ity olana ity amin'ny alàlan'ny fampiharana matanjaka sy manerantany. Roy LaManna, mpanorina sy CEO an'ny Vydia
Ny endri-kevitr'i Vydia's Agency dia misy ny fahaizana:
Manasa Mpamorona - Mandefasa mailaka amin'ny sambo mpamorona anao avy amin'ny dashboard Vydia anao ary apetraho ny isan-jato voatondro ho an'ny fizarana vola.
Mamoaka hisafidianana toerana itodiana - Atsofohy amin'ny sehatra mifandray avy hatrany ny atin'ny mpamorona na fandaharam-potoana sy andro.
Apetraho ny politikanao - Misafidiana hanaiky, hanakana na hanome vola ny mpamorona horonantsary miankina amin'ny tanjon'ny paikadin'ny votoatinao video.
Manatsara ny kaonty - Ny karama dia zaraina ho azy amin'ny mpandray sahaza azy. Araho mora foana ny loharanom-bola rehetra ary fantaro ireo mikarama ambony.
Araho maso ny vola azo sy ny zava-bita - Ny Analytics ho an'ny mpamorona rehetra, ny lahatsarin'izy ireo ary ny fangatahan'ny UGC, amin'ny sehatra rehetra dia misy amin'ny tabilao feno.
Nampiasain'ny mpitendry zavamaneno, influencer, ary marika maherin'ny 180,000 manerantany, ny sehatra Vydia dia manolotra serivisy fanangonam-bola sy serivisy fizarana izay mora azon'ny mpamorona amin'ny rindrambaiko desktop sy mobile. Vydia dia mpiara-miasa premium an'ny mpanonta nomerika lehibe toa an'i Vevo, Youtube, Facebook ary Dailymotion ary koa tambajotra toa ny BET, MTV, ary ny Music Choice.
Tags: Lahatsary Marketinghoronantsary media sosialyugcatiny novokarin'ny mpampiasafamoronana horonan-tsarympamorona horonantsaryvideo monetizationpolitika amin'ny videofamoahana horonan-tsaryvydia
CloudCherry: Sehatra iray manontolo amin'ny fanaovana sarintany ny dia nataon'ny mpanjifa